ဘဝမှတ်တိုင်: October 2016
Xiaomi Mi Note ကို Mi account unlock ပြုလုပ်နည်းလေးပါ။
လိုအပ်တဲ့ဖိုင်ကိုရယူပြီး ပြုလုပ်ပုံလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်
အရင်ဆုံး အောက်က Link ကနေ TWRP Down ပါ။
oooooOOOOO TWRP အား ရယူနိုင်ရန် OOOOOooooo
Down လို့ရတဲ့ file ကို recovery လို့ Name ပြောင်းပြီး Fastboot Mode ဝင် အောက်က Command ရိုက်။
TWRP တက်လာရင် adb reboot edl လို့ရိုက် ပြီး 9008 ဝင် Mi Flash နဲ့ UI 8 ကစ်ပေးလိုက် ပြုတ်ရော ။ ကျန်တဲ့ Model တွေလား ကွကို စမ်းကြပေါ့ ။
Refer – Thiha Aung
KoHtoo ( MMAS )
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 10/27/2016 12:35:00 am0comments
♪ Android ဖုန်းများကို Root ဖောက်ရန်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်တဲ့ King Root v4.1 apk ♫
Android ဖုန်းများကို apk နဲ့ Root ဖောက်တဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်တဲ့ King Root apk လေးရဲ့ version တွေအများကြီးထဲကမှ v4.1 apk လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ King Root apk ရဲ့ version တွေ ထဲမှာတော့ ဒီ version လေးကတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ အချို့ latest version တွေနဲ့မတိုးတဲ့ Android v5.1 တွေတောင်ဒီ version လေးနဲ့ပေါက်ပါတယ်။ ကျတော်ကတော့ Samsung S6 Edge မှာကြုံဖူးတာပါ။ လိုအပ်ပါက ရယူနိုင်ပါတယ်။
oooooOOOOO King Root v4.1 Apk Download Link OOOOOooooo
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 10/24/2016 10:18:00 pm0comments
Xiaomi (mi) ဖုန်း အမျိုးအစားပေါင်း (၂၉) မျိုးကို Recovery တင်ခြင်း၊ Root ပြုလုပ်ခြင်း၊ Firmware တင်ခြင်း အမျိုးမျိုးကို အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်တဲ့ All In One Tool လေးပါ... Stable Version လေးမို့ Update လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ ဖိုင်လ်ဆိုက်ဒ်က 2.8MB ပဲရှိပါတယ်..။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 10/24/2016 10:12:00 pm0comments
✿ Root မလိုပဲ Xiaomi ဖုန်းများကို Play Store အလွယ်တကူထည့်သွင်းနိုင်မဲ့ - Xiaomi v6.0 Google Play Store Installer ✿
Xiaomi ဖုန်းများရဲ့ Android version 6.0 ကို Google Play Store
အလွယ်တကူထည့်သွင်းနိုင်မဲ့ installer bat ဖိုင်လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီ installer လေးကိုအသုံးပြု ဖို့ ဖုန်းမှာ Root လုပ်ထားဖို့မလိုပါဘူး။
ကိုညီပိုင်မှရေးသားမျှဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ပါက ရယူနိုင်ပါတယ်။
အသုံးလိုအပ်တဲ့ မိတ်ဆွေများ Download ရယူလိုက်ပါ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 10/24/2016 10:10:00 pm0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 10/24/2016 10:07:00 pm0comments
♪ Root မလိုပဲ မြန်မာစာ အမှန်ပေါ်စေမယ့် - iFont (Expert of Fonts) Donate v5.8.1 Patched Apk ♫
Android OS နှင့် Tablet ကိုင်ဆောင်ထားသော သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Android ဖုန်းတွေမှာ font
တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူသွင်းနိူင်ဖို့ iFont Donate v5.6.2 (Expert of Fonts) Cracked APK
နောက်ဆုံးထွက် လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ Samsung, XiaoMi (MIUI), Meizu, HuaWei, Htc,
(Emotion UI) , Sony, Motolora အစရှိတဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားများမှာ Root မလိုပဲ မြန်မာဖောင့်ကိုမှန်ကန်
စွာနဲ့ရေးနိုင်ဖတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Font Style ပါလာတဲ့ ဖုန်းတော်တော်များများကို မြန်မာစာထည့်ပြီး
အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ပြောရင်ပိုပြီးမှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ အခု iFont Apk ထဲကနေပြီး Font Style တွေ
Font Size တွေကို လိုအပ်သလိုပြောင်းလဲနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဒါ့အပြင်အခြားသော Font အလှ
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 10/24/2016 10:01:00 pm0comments
Internet Download Manager 6.26 Build7[Just Download & Install, No Crack or Patch Need]
အောက်တိုဘာ (၁) ရက်နေ့ကထွက်တဲ့ နောက်ဆုံးထွက် (IDM) Internet Download Manager 6.26 Build7ပါ....
အားလုံးအဆင်ပြေစေဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး Patch,Crack,Serial Key တွေ အသုံးပြုစရာမလိုအောင် ဖန်တီးပေးလိုက်ပါတယ်။ အောက်မှာ တင်ပေးထားတဲ့ IDM26B7.exe ဖိုလ်ကို Download ဆွဲပြီး Next အဆင့်ဆင့်နဲ့ Install လုပ်ပေးရုံပါပဲ။
မှတ်ချက်။ ။ Error တစုံတရာတတက်ခဲ့ရင် အရင်ထည့်ထားတဲ့ IDM Version အဟောင်းကို Uninstall (ထုတ်) ပစ်ပါ.. စက်ကို Restart ချပါ.. Ccleaner နှင့် ရှင်းထုတ်ပါ.. ပြီးမှ အခု Version အသစ်ကို Install လုပ်ပါ။
Uninstall ပြုလုပ်နည်းကို မသိသေးလို့ လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင် ဒီနေရာမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်မျာ...။
Internet Download Manager (IDM) Full isareliabe and very useful tool with safe multipart downloading technology to accelerate from internet your downloads suchavideo, music, games, documents and other important stuff for you files. IDM hasasmart download logic accelerator and increases download speeds by up to5times, resumes and schedules downloads.
Internet Download Manager 6.26 Build7[Latest Version]
[No Crack or Patch Need]
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 10/04/2016 07:13:00 pm0comments